Sina mankany Mexico-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Serivisy serivisy>Iine Amerikanina Avaratra>Sina ka hatrany Meksika
Fandefasana entana avy any Shina mankany Mexico
Maro amin'ireo mpanjifanay no monina any Mexico, noho izany dia lasa tsena tena lehibe ho anay izy io. Izahay dia nanao sonia ny tahan'ny fifanarahana amin'ireo mpitatitra toa ny COSCO, OOCL, APL, EMC, MSK, ary HMM. Ireo fifandraisana ireo dia ahafahanay manome anao ny tahan'ny fandefasana entana tena tsara rehefa mandefa avy any Shina mankamin'ny seranana rehetra any Mexico.
Miaraka amin'ny SHL ho mpiara-miombon'antoka, ny fandefasana entana avy any Shina mankany Mexico dia ho mora kokoa, ianao ihany no mila mamela anao ny entanao, ary izahay no hanao ny ambiny. Ny SHL dia mikendry ny ho mpandefa entana tsara indrindra avy any Shina mankany Mexico. Mangataha teny nindramina tsara kokoa izao.
Fandefasana Ro-Ro / Break Bulk avy any Shina mankany Mexico
SHL dia afaka manome RORO ROROMAFI BREAKBULK ho an'ny fitaovana marina, fiara ary fitaovana mavesatra avy any Shina ka hatrany Mexico Afaka manome vahaolana hijanonana sy mifanaraka manokana izahay.
Fandefasana entana an-dranomasina avy any Shina mankany Mexico
Fandefasana entina fiaramanidina avy any Shina mankany Mexico
Hisafidy ny seranam-piaramanidina antonony indrindra ho an'ny fandefasana anao izahay mifototra amin'ny fotoana takinao. Bansar no vahaolana tsara indrindra handefasana entana ho an'ny sidina avy any Shina mankany Etazonia.
Fandefasana mora indrindra avy any Chine mankany Mexico
Miankina amin'ny isan'ny entana alefanao avy any Shina mankany Mexico izany, raha tsy maika amin'ny santionany kely ianao dia afaka mampiasa China Post na maneho toy ny DHL, raha manana entana maro ianao dia mifandraisa Bansar, hahazo ny fandefasana entana tsara indrindra izahay taha avy any Chine ka hatrany Mexico.
Hafatra / ohatrinona ny fandefasana avy any Shina mankany Mexico
Fandefasana isam-baravarana avy any Shina mankany Mexico
Ny mpandefa entana tsara indrindra ho anao avy any Shina ka hatrany Mexico
Omeo ny vidin'ny sambo sy ranomasina mifaninana avy any Chine mankany Mexico.
To Seaport any Mexico
Seranam-piaramanidina lehibe any Mexico
Licenciado Benito Juarez International Airport Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Mariano Escobedo
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Don Miguel Hidalgo Y Costilla
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Bahías de Huatulco
Seranam-piaramanidina Licenciado Manuel Crescencio Rejon Int Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Leobardo C. Ruiz
Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena General Abelardo L. Rodríguez Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Cancún
Seranam-piaramanidina jeneraly Roberto Fierro Villalobos Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Cabo San Lucas
Seranam-piaramanidina Intercontinental Querétaro Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Jesus Teran
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Quetzalcóatl
Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Jeneraly Francisco J. Mujica Seranam-piaramanidina iraisampirenena Los Cabos
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International Airport Seranam-piaramanidina Ciudad Constitución
Seranam-piaramanidina Playa del Carmen Seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Del Bajío
Ny tranokala CBP https://www.cbp.gov/ dia manana fampahalalana marobe momba ny fomba amam-panao any Mexico.